Petr Prins Derek Vaughan (1915-2003) - umhumushi abadumile British zeBhayibheli, umsakazo kabani nsuku zonke uhlelo olusakazwa emhlabeni wonke ngezilimi ezihlukahlukene. Prince okuningi washumayela emhlabeni wonke, wayekhathazekile mayelana nezindaba zokholo nokukhululwa avela emimoyeni emibi. Izimfundiso zakhe nekuhumusha namanje awalulahlanga ukuthandwa futhi siqhubeke uwine abalandeli abasha.
Derek Prince wazalelwa e-India, emkhayeni wamasosha ka eBrithani. Ngisho nalapho ngiseyingane abazali bakhe amthume UK ziqeqeshe ugogo. Baqeqeshelwa njengoba onguchwepheshe emkhakheni zesiGreki nesiLatin at Eton College futhi waseCambridge University eNgilandi, yena yanikezelwa umfundaze emkhakheni wefilosofi zasendulo nezanamuhla at College WeNkosi. Derek Prince futhi Wafunda izilimi eziningana zanamuhla, kuhlanganise isiHebheru nesi-Arabhu eCambridge University futhi lesiHebheru University eJerusalema.
Lapho beqeda izifundo zakhe, wathuthela nokufundisa. Kuhle kokusho ukuthi Prince wayengeyena umuntu yenkolo kuze kufinyelele eminyakeni ewu okucabanga
Nakuba abakhonza LaseBrithani eMpini Yezwe II, uDerek waqala ukutadisha iBhayibheli futhi wafunda nefilosofi entsha abayohlanganiswa noJesu Kristu. Kusukela kulo mhlangano, uDerek Prince wenza iziphetho ezimbili: iisus hristos uyaphila, iBhayibheli - liyincwadi yangempela neziphuthumayo. Le miphumela zishintshile indlela yakhe wonke wokuphila, ukuthi ngemva kwempi wayehumusha ngokugcwele ekutadisheni futhi imfundiso yeBhayibheli. Kwakuphakathi nalesi sikhathi iqala isendleleni cazelo of imiBhalo ukuze bonke, lokho azokwenza ukuze ukuphila kwakhe konke.
Derek isipho main ezichaza iBhayibheli nokufundisa isendleleni ecacile nelula, okuyinto wasiza ekubekeni isisekelo sokumiswa sokholo izigidi zabantu. engeyona denominational, indlela yakhe non-amahlelo uye wenza ukufundisa kwakhe efanele ngokulinganayo futhi ewusizo kubantu nazo zonke izimfundiso zobuhlanga nakwezenkolo.
Ngo-1945, i-Prince washada uLidiya Christensen sevangeli Danish, owayeneminyaka abaphezulu yakhe ngeminyaka 26. Yena waba nguyise wabo nezingane zakhe eziyisishiyagalombili yokutholwa - eziyisithupha yamaJuda, omunye asePalestina nokukodwa waseBrithani - futhi kamuva lo mbhangqwana yokutholwa omunye indodakazi eKenya.
Umndeni bethuthele e-United States ngo-1963, futhi Prince waba ngumfundisi esontweni e-Seattle. Ngo-1970 ekuseni, Prince wafundisa ngesidingo amaKristu ukuba athandaze acele ngoba abaholi bamazwe.
Derek Prince. Liberation emimoyeni emibi
Ngenxa likaMoya, Prince bakholwa ngokoqobo okusebenza emhlabeni ka Amabutho ezingokomoya futhi amandla amademoni ezibanga izifo zengqondo. E Seattle, ngakho wacelwa ukuba enze yokukhululwa abesifazane, futhi wafinyelela esiphethweni ukuthi amaKristu kungenziwa "idemoni." Lokhu kwakuphambene kakhulu ajwayelekile umbono likaMoya wokuthi amademoni angaba "babe" abangakholwa, kepha bahluleka "ucindezele" kuphela amaKristu. Prince wacabanga nenkonzo yakhe wenkululeko uye wasebenzisa amandla kaNkulunkulu ukuze anqobe amademoni.
Derek Prince: izincwadi nezimfundiso
Prince, owafundisa ngezihloko eziningi futhi izifundo, kuhlanganise amaqiniso eziyisisekelo zeBhayibheli, cishe umhlabeleli aziwa izimfundiso zabo zamademoni, futhi inkonzo ukukhululwa kwama-Israyeli. Ukubuyiselwa Israyeli sasiyibandla Isihloko esiyinhloko sokushumayela kwakhe. Incwadi yakhe "Sinesibopho sokwazisa Israyeli," "izwi lokugcina eMpumalanga Ephakathi" futhi "benhlanhla iSrayeli iSonto," kusho amaKristu futhi esibophweni sazo ukuze Israyeli namaJuda.
Yena zakhuza umhlola ukuba emfundisweni esikhundleni. Encwadini "benhlanhla iSrayeli iSonto" uqinisekisa ukuthi isonto liye hhayi esikhundleni sika-Israyeli, nokuthi lesivumelwano uNkulunkulu wenza nabantu yamaJuda, wawusasebenza namuhla - ngakho uthi Derek Prince. "Isibusiso Noma Isiqalekiso" - lokhu ingenye edume kakhulu izincwadi zakhe. Ngokusho abafundi kwangisiza ukuba baphume nezimo ezinzima futhi uthole amandla ukuqhubekela phambili.
Derek Prince kuyinto umlobi wezincwadi ezingaphezu kwezingu-50, 600 alalelwayo nama 100 umlayezo wevidiyo, eziningi zazo ziye zahunyushelwa futhi lanyatheliswa ngezilimi ezingaphezu kuka-100. Ezinye izihloko zihlanganiswe izimfundiso zakhe - a nokuzila ukudla, izisekelo zokholo lobuKristu, zikamoya, uthando kaNkulunkulu, umshado nomkhaya. ukusakaza lakhe nsuku zonke umsakazo ngesi-Arabhu, isiCroatia, isiJalimane, isi-Mongolian, isiRashiya, Samoan, iSpanishi.
Umsebenzi Derek Prince ukuze senze iqiniso lokuthi bona bephendukela kwabanye ethembekileyo emazweni angaphezu kuka-140 nezimfundiso umshumayeli kokwenza umyalo wakhe "kuze kube yilapho uJesu ubuyela." Lokhu kwenziwa ngosizo ezingaphezu kuka-45 ohambweni emhlabeni wonke, kuhlanganise umsebenzi omningi e-Australia, eCanada, iChina, iFrance, iJalimane, New Zealand, iNorway, iNetherlands, i-Russia, South Africa, Switzerland, United Kingdom nase-United States.
Prince washona elele 24 Septhemba, 2003 eneminyaka engu-engu-88 eJerusalema ephethwe yisifo senhliziyo, eshiya a lot of izincwadi nezintshumayelo eziye aphefumulelwe abantu ezindaweni ezihlukahlukene zezwe futhi niyaqhubeka nilondoloze amakholwa yayo kweqiniso futhi kubonakala ngothando ukuphila kwabo.
Indlela yenza Potion lokungabonakali ku "Maynkraft"? Iba umuntu engabonakali.